#3 သင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်သူဆုံးဖြတ်တာလဲ? | Mycanvas
လက်ရှိ သင်နဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့၁၀နှစ်တုန်းကသင်နဲ့ လုံးဝတူညီသေးတယ်လို့သင်ထင်ပါသလား? သင်တို့အများစုရဲ့အဖြေက ‘မတူတော့ဘူး’ ဆိုပြီးပဲဖြေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျိန်းသေပြောင်းလဲသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပေမယ့်လည်း ၁၀နှစ်အကြာမှာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ လူတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစဉ်းစားရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ အပြောင်းအလဲများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်လာရန်မျှော်လင့်သော ကျွန်ုပ်တို့အနာဂတ်အတွက်ပြောင်းလဲမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအာရုံစိုက်နေတာထက် အနာဂတ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်လာချင်တယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေရန်လိုပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်းစီမျှော်လင့်ထားတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်အတွက် မဟာဗျူဟာ (၃) ခုအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမယ်။ ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ တတိယအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Step3: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းဝိသေသလက္ခဏာကို Update လုပ်ပါ
ဝိသေသလက္ခဏာဆိုတာဟာ မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ မိမိရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝိသေသလက္ခဏာက အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပြီးရလဒ်အဖြစ် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ကြောင်းဝိသေသလက္ခဏာဆိုသည်မှာလူများသည်အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာဂတ်တို့ကိုဖော်ပြသောဇာတ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ အတိတ်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်ဝိသေသလက္ခဏာကိုသာအာရုံစိုက်ပါကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ အနာဂတ်ကိုလည်းအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဇာတ်ကြောင်းဝိသေသလက္ခဏာကို Update လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင် သူတို့သည်မည်သို့သောလူစားမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုအခြားသူများအားပြောရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြောဆိုနိုင်ရန် သင်သတ္တိလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ တခြားသူတွေနဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်က တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။